China Spherical Roller Bearings 22200 Series orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Yi Xinyan
Roller roller spherical dia peratra anatiny anatiny, boribory ivelany racher spherical ary spherical roller bear type. Ny foibe ivelany raceway centre mifanaraka amin'ny foibe fiterahana, manana toetra mampifanaraka tena izy, afaka manitsy avy hatrany ny hadisoan'ny fananganana duo na ny familiana ny hazo eo anelanelan'ny ny zana-kazo eccentric sy ny fitondra, ny peratra ivelany ary ny peratra anatiny raha oharina amin'ny tsipika afovoany tsy mihoatra ny1-2.5, dia mbola afaka mandeha tsara ny fiterahana. Izy io dia afaka mitondra enta-mavesatra sy enta-mavesatra, indrindra ho an'ny adidy mavesatra sy ny hatairana.
MB / CA / CC / EK / lahy ity / CMW33
Roller bearer dia ampiasaina matetika amin'ny milina fanaovana papermaking, fanenon-jiro, familiana tahiry familiana, fitotoam-baravarankely, familiana, Roller, crusher, horonan-tsarimihetsika, milina fanontam-pirinty, milina fanaovana kitay, karazan-java-manidina indostrialy rehetra, fananganana miorina misy seza ho ivon'ny.
Miovaova be koa ny fononay, ny tanjona dia ny hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa samihafa.
Fonosana indostrialy + palety
2. boaty hazo + paleta
3.Araka ny takiana aminao
1. Ataovy madio ny bearings sy ny tontolony miasa
Na dia tsy mahita ny vovoka kely aza ny maso, dia hitondra voka-dratsy amin'ny fitondra milina koa, noho izany, hitandroana ny fahadiovan'ny manodidina, mba tsy hanafihan'ny vovoka ny fiterahana.
2. Ampiasao tsara
Omeo ny fiatraikany amin'ny fampiasana fiatraikany mahery vaika, hiteraka takaitra sy mangana, nanjary antony nahatonga ny loza. Amin'ny tranga matotra, hisy triatra sy vaky, ka tsy maintsy jerena ny saina.
3. Ampiasao ny fitaovana mety
4.Mba handinihana ny fihenan-tsetroka
Ny fiasan'ny masinina, ny hatsembohana amin'ny tànana no ho antony mahatonga ny harafesina, manongilan-tsofina amin'ny fampiasana tanana madio hiasa, tsara kokoa ny manao fonon-tànana.
Previous: Spherical Roller Bearings 22300 Series
Manaraka: Deep Groove Ball Bearings 6000 Series